उत्तमबाबु श्रेष्ठको वालबाट
नेपालीले हिमाल आरोहणमा विश्व कीर्तिमान राखे। अब नेपालले हिमालसम्बन्धी अनुसन्धानमा पनि विश्वमै अग्रणी हुने हो। हाम्रो रणनीतिक फाइदा भएको क्षेत्र हो यो। यसमा ध्यान दिऊँ।
छोरीः यो शहर कस्ले बनाको, बाबा ?
आमाः किन ?
छोरीः बच्चाको लागि एउटा खेल्ने पार्क छैन, घरै मात्र।
हामी तैँ चुप, मै चुप। नयाँ पुस्ताको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने पुस्तामा परिएछ।
ठूला आविष्कार त परै जाऊन्, हामीले सास फेर्ने हावा र पिउने पानीको स्वच्छताको, खाने तेल र तरकारीको गुणस्तरको, गुड्ने र हिँड्ने बाटोको सुरक्षाको अनुसन्धान विश्वविद्यालयको प्राथमिकतामा पर्दैन।
हामी दुई ठूला आर्थिक वृद्धिदर भएका छिमेकीहरूको बीचमा मात्रै छैनौँ। संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित शहरहरूका बीचमा पनि छौँ।
नेपालमा विज्ञान दिवसका नाममा हरेक वर्ष तामझाम हुन्छ। तर, हामी विज्ञान शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा संसारमै पुछारमा छौँ। नेपालमा विज्ञान दिवस मनाउन मन्त्री, कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीसमेत सामेल हुन्छन्। तर, उनीहरूले बजेट छुट्याउँदा विज्ञान क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम रकम छुट्याउँछन्।
मैले थाहा पाएदेखि नै कांग्रेसले बीपी जयन्तीमा रूख रोप्छ। जुन राम्रो काम हो। कुनै वर्षमा (जस्तै, प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा) आफूले रोपेका बिरुवा कस्ता भएछन् भनेर तथ्यांक संकलन गर्ने, त्यसलाई हेरचाह गर्ने फुर्सद पनि निकाल्ने हो कि त ?
बाल्यकालमा देखेको सिमली, तितेपाती, नुनढिकी, अडेरका झाडीहरू कता हराए ? अहिले त जताततै विदेशबाट आएका मिचाहा वनमारा झारहरू मात्रै देखिन्छ।
बच्चाहरूलाई निःस्वार्थी बन्न होइन, परोपकारी हुन प्रेरित गरौँ। निःस्वार्थीले आफ्नो वास्ता नगरी अरूलाई सहयोग गर्छ। अनुसन्धानका अनुसार त्यो दिगो हुँदैन। परोपकार भनेको आफूलाई हानि नपुराईकन अरूलाई सहयोग गर्नु हो। परोपकारले थप परोपकार जन्माउँछ र दिगो हुन्छ।
अन्यत्र त भइहाल्यो, काठमाडौँका हस्पिटलहरू अगाडिको जेब्राक्रसिङमा, जहाँ बिरामीहरूले बाटो काट्छन्, त्यहाँ गाडीहरू रोक्दैनन्। जेब्राक्रसिङ छ भन्ने साइनबोर्ड अलि पर नै हुन पर्‍यो। अनि, गाडीहरूले स्लो गर्छन् कि ?
रिङरोडको प्रत्येक किमीमा देखिने र काठमाडौँको हरेक गल्लीमा खुलेका सानाठूला निजी अस्पतालहरूको संख्या बढोत्तरी र त्यसमा बिरामीको चापले के संकेत गर्छ ? हामी रोगी हुँदै छौँ या हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा वृद्धि भइरहेको छ ? मलाई त हामी रोगी हुँदै छौँ कि जस्तो लाग्यो।
देशमा बहस, छलफल सधैँ अमूर्त सैद्धान्तिक र ठूला कुरामा हुने। व्यक्तिलाई दानव-देवता बनाउन हजारौँ जम्मा हुने। तर, आफूले सास फेर्ने हावा, पिउने पानी, खाना खाने रेस्टुरेन्ट, किन्ने तरकारी, हिँड्ने बाटो, सार्वजनिक यातायातको गुणस्तरको बारेमा यहाँ यस्तै हो भनेर सबै पन्छिने।